Nagarik Shukrabar - अशोक दर्जी विवाद : संरक्षणको आवरणमा कुनियत
शुक्रबार, ११ साउन २०७५, ०५ : ५९ | पुष्पा थपलिया
सबैलाई थाहा छ, रामकृष्ण ढकाल चर्चित गायक बन्नुमा उनको गला र कलासँगै गोपाल कर्माचार्यको भूमिका महत्वपूर्ण छ । बरालिँदै गीत गाउँदै हिँडेका ढकाललाई काठमाडौं ल्याएर कर्माचार्यले संगीत क्षेत्रमा स्थापित गरी दरिलो पृष्ठभूमि बनाइदिए ।
सामाजिक सञ्जालको फैलावटसँगै केहीले उनै कर्माचार्यको पदचाप पछ्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । जसले निःस्वार्थ काम गरे ती सफल भइरहेका छन् । जसले समाजसेवाको आडमा व्यक्तिगत स्वार्थ भजाउने प्रयास गरे, ती विवादमा तानिए ।
नौ वर्षका बालकलाई करिअर बनाउनतिर लतार्ने कि पढाइ–तालिम अनि मात्र करिअरमा ध्यान दिने बनाउने ? उनको संरक्षण लिने टंक बुढाथोकीको ध्यान केमा छ भन्ने बुझ्न अशोकको युरोप टुर क्यान्सिल भएपछि उनै बुढाथोकीले फेसबुकमा राखेको स्टाटसले देखाउँछ ।
उनले लेखेका छन्, ‘अशोकको संसार देख्ने सपना टुटेको छ, अब अशोक बाबुलाई मैले के भनेर बुझाउने होला है ? दादा हामी कहिले जाने युरोप भनेर हिजो मात्र सोधेका थिए ।’
अशोकको घर बनाउने ठेकेदारले पैसा नपाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि घर बनाउन उठाएको रकमको पारदर्शितासमेत विवादमा आयो । यस भन्दा अगाडि जग्गा खरिदमा एक लाखको विवाद आएको थियो । यो विवाद रोकिने छाँट छैन । बढ्दो छ ।
हो चैँ के त ?
के अशोकको संरक्षकले पढाइभन्दा पैसामा जोड दिएकै हुन् त ? उनलाई भर्ना गरिएको बेथेल एजुकेसनल एकेडेमीको रेकर्ड हेर्दा यस्तै देखियो । विद्यालयका प्रिन्सिपल न्यौपानेका अनुसार अशोक विद्यालय भर्ना भएको तीन महिना भयो तर उनी मुस्किलले ४५ दिन मात्रै स्कुल पुगेका छन् । असार २३ मा काठमाडौं आएका उनी यतै छन् ।
लिक भएको टंकका दाजु टीकाराम र प्रिन्सिपल न्यौपाने बीचको टेलिफोन संवादमा टीकारामले युरोपको तयारीका लागि काठमाडौं ल्याएको, युरोपको काम सकिएपछि फर्काउने बताएको सुनिन्छ ।
टंक भने अशोकलाई काठमाडौं पढाउने सुरले ल्याइएको बताउँछन् । उनले अशोकलाई काठमाडौं पढाउने योजना आफ्नो नभई अशोकको बाबुको भएको दाबी गरे ।
‘सम्झौताविपरीत मलाई नसोधी लैजान त नमिल्ला नि !’ न्यौपानेले भने ।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा टंकले ‘उहाँकै बाबुले ल्याएकाले उतै सोध्नु’ भन्दै पन्छिए ।
संरक्षणको आवरणमा कुनियत
विवाद सुरु भएको युरोप टुरका कारण हो तर अशोक र टंक दुवैको युरोप टुरको प्रयास सफल भएन । दुवैको भिषा अस्वीकृत भयो । युरोप टुरको टन्टा त सकियो तर नाबालक अशोकको भविष्य कसरी अगाडि बढ्ला यो विवाद भने जारी छ ।
अशोकको ठाउँमा आफ्नै छोरा भएको भए, परीक्षा छुटाएर युके लैजान खोज्नुहुन्थ्यो ?
शुक्रवारको जिज्ञासामा टंकले निर्धक्क भने, ‘अवश्य लैजान्थें । कला र गला नभई कसैले अफर गर्दैन । कला गला र क्षमताको भरमा अफर आए छोरालाई युके मात्रै हैन, मलेसियामै भए पनि पठाउँछु ।’
पढाइभन्दा पैसा ठूलो हो त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मलाई यसबारे केही भन्न आएन, तपाईंले जे देख्नुभएको छ, त्यहीअनुसार लेख्नुस् ।’
यही संवादले देखाउँछ यत्रो विवादपछि पनि टंकको दिमागमा नाबालक अशोकको पढाइ भन्दा विदेश टुर नै पहिलो प्राथमिकतामा देखिन्छ । विदेश टुर अर्थात् पैसा ।
घर के हुँदैछ त ?
अशोकको घर बनाउने विषय पनि विवादमा छ । टंक सहितको आर्थिक समितिले पाँच लाखमा जग्गा किनेको बताएका थिए । त्यसलगत्तै जग्गा बिक्री गर्नेले चार लाखमा बेचेको सार्वजनिक गरेपछि एक लाख कता गयो भन्ने विवाद सुरु भएको थियो । पछिल्लो समय घर बनाउने ठेक्का पाएका व्यक्तिले भुक्तानी नपाएको भन्दै विवाद भएको थियो ।
टंक अशोकको घर बनाउन १७ लाख जम्मा भएको र घर बनाउने काम जारी रहेको बताउँछन् तर अहिलेसम्म कति रकम खर्च भयो त्यो खुलाउँदैनन् ।
‘अहिले भर्खर मात्रै तीन बोरा सिमेन्ट र रड लगियो, अझै के–के किन्नै बाँकी छ, यो त घर पूर्ण रुपमा निर्माण नभइकन भन्न सकिने कुरै भएन नि !’ उनले भने ।
अशोकको भिजुअल टंक र अर्का डिजे रुपकको व्यक्तिगत च्यानलमा समेत देखिन्छ । जसको भ्युअर्स राम्रै छ । ती दुवै च्यानलबाट राम्रै आम्दानी भइरहेको देखिन्छ । अशोकको गीत आफ्नो च्यानलमा हालेपछि टंकले युट्युबको पैसा अशोकलाई पनि दिने बताएका थिए ।
तर अहिले उनी भिडियोहरुबाट कति आम्दानी भइरहेको छ भन्ने पनि खुलाउन चाहँदैनन् । उनी यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको दाबी गर्छन् । युट्युबबाट आएको पैसामध्ये चार लाख अशोकको घर बनाउने दिने र अरु सबै आफ्नै आम्दानी रहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मेरो व्यक्तिगत सम्पत्तिको खोजीनिती किन गर्नुहुन्छ ? त्यो नखोल्ने त मेरो ब्यक्तिगत अधिकार छ ।’